Boeing sy Alaska Airlines mahatonga ny sidina ho azo antoka sy maharitra kokoa | Vaovao momba ny fiaramanidina
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Teknolojia fitsangatsanganana • Travel Wire News • News News
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » Boeing sy Alaska Airlines mahatonga ny sidina ho azo antoka kokoa sy maharitra
Mpiara-miasa Boeing sy Alaska Airlines amin'ny fandaharana Boeing ecoDemonstrator farany.
Advanced Technology winglets ao amin'ny fianakaviana 737 MAX izay mampihena ny fampiasana solika sy ny famoahana entona
Fampiharana iPad izay manome toetrandro tena izy sy tahirin-kevitra hafa ho an'ny mpanamory fiaramanidina, manatsara ny fahombiazan'ny solika ary mampihena ny CO2 entona.
Rafitra fakantsary ao amin'ny 777X vaovao izay hanatsara ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fanampiana ireo mpanamory fiaramanidina hisoroka sakana amin'ny tany
Boeing sy Alaska Airlines dia nanambara androany fa miara-miasa amin'ny programa Boeing ecoDemonstrator farany izy ary hanao andrana momba ny teknolojia 20 amin'ny 737-9 vaovao hanatsarana ny fiarovana sy ny faharetan'ny dia an'habakabaka.
Amin'ny sidina manomboka amin'ity fahavaratra ity, Boeing ary Seranam-piaramanidina Alaska dia hizaha toetra ny mpamono afo mpamono afo tsy misy halona vaovao izay mampihena be ny fiatraikany amin'ny sosona ozonina, manombatombana motera nacelle namboarina mba hampihenana ny tabataba sy hanombanana ny sisin-dabilio vita amin'ny akora namboarina, ankoatry ny tetikasa hafa.
"Efa ela ny fiarahantsika miasa amin'ny Boeing hampandroso ny teknolojia fiaramanidina, ny fiarovana ary ny fanjifana solika," hoy i Diana Birkett Rakow, filoha lefitry ny Alaska Airlines, ny raharaham-bahoaka ary ny faharetana. “Ny sidina Alaska Airlines dia manidina any amin'ny faritra tsara tarehy sy maro karazana indrindra eto an-tany ary manolo-tena hitady fomba hampihenana ny fiantraikan'ny toetrandro manerana ny tambajotranay izahay. Ity fiaraha-miasa amin'i Boeing ity mba hanafainganana ny fanavaozana ny programa ecoDemonstrator dia ahafahantsika mandray anjara amin'ny ho avy maharitra ho an'ny vondrom-piarahamonintsika manerantany. ”
Hatramin'ny 2012, ny programa ecoDemonstrator dia nanafaingana ny fanavaozana tamin'ny alàlan'ny fakana teknolojia mampanantena efa ho 200 avy ao amin'ny laboratoara ary fizahan-toetra azy ireo eny amin'ny habakabaka hamahana ireo fanamby ho an'ny indostrian'ny fiaramanidina ary hanatsara ny traikefan'ny mpandeha.
"Boeing dia manolo-tena hanatsara hatrany ny fiarovana ny rivotra sy ny fahombiazan'ny tontolo iainana ny vokatra vokarinay," hoy i Stan Deal, filohan'ny tale jeneralin'ny fiaramanidina ara-barotra Boeing. "Faly izahay miara-miasa amin'ny mpanjifanay sy ny mpiara-miasa aminay manerana an'izao tontolo izao amin'ity taona ity mba haharitra kokoa."
Tao anatin'ny dimy volana nanaovana andrana sidina ecoDemonstrator, hiasa miaraka amin'ireo mpiara-miasa sivy hafa i Boeing sy i Alaska mba hitsapana teknolojia vaovao. Rehefa vita ny fitsapana dia hamboarina ny seranam-piaramanidina ho an'ny serivisy mpandeha ary aterina any Alaska.